ဘယ်လိုရှာရမလဲ — MYSTERY ZILLION
March 2010 edited May 2010 in Windows Server
ကျွန်တော်တို့ windows server တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ driver တွေတင်တဲ့အခါမှာ motherboard နဲ့ အတူပါလာတဲ့ driver တွေဟာ များသောအားဖြင့် windows Xp/ Vista/7အတွက်ဘဲပါနေပါတယ်. windows server အတွက်မပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဗျ။ original motherboard site ထဲဝင်ရှာလည်းမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လို driver တွေကိုသူံးရမလဲ။ သိတဲ့အစ်ကိုအစ်မများဖြေပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
March 2010 edited March 2010 Registered Users, Moderators
အစ်ကိုရေ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အကြံတစ်ခုပေးပါရစေ။ Active Media ဆိုင်မှာ driver collection လုပ်ထားတဲ့ CD ပေးပါလို့။ DVD မဝယ်ပါနဲ့ CD ကပိုကောင်းလို့ပါ။ အခွေထဲမှာ sound ဆို sound... graphic ဆို graphic ဆိုပြီးခွဲထားတယ်။ အစ်ကိုမသိတဲ့ driver ကို အခွေကနေ စက်ထဲ copy အရင်ကူး...ပြီးတော့ rar ဖိုင်ကိုဖြည်။ ဖြည်ပြီးရင်တော့ ထွက်လာတဲ့ ဖိုလ်ဒါကို Search လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီကနေမှာ type စီလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ဖိုလ်ဒါရယ် rar ဖိုင်ရယ်ကလွဲပြီးရှိသမျှကို Cut နဲ့ကူးပြီး ဖိုလ်ဒါတစ်ခုမှာ ပြန်စုလိုက်ပါ။ အဲဒီကနေမှတဆင့် Device Manager မှာ driver ကို ပြန်စုထားတဲ့ဖိုင်ကို ညွှန်းပြီးရှာခိုင်းလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါအခွေကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်လောက ဆိုင်လာအပ်တဲ့စက်မှာ Modem driver ကို သူ့ဆိုဒ်မှာသွားရှာပြီးတင်ပေးတာတောင်မရဘူးဗျ။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီအခွေလေးစမ်းဝယ်ပြီး စမ်းလိုက်တာရသွားသဗျ။
ကျွန်တော်ကတော့ High Definition (HD) ကိုထည့်တာတွေတော့ရတယ်သူ့ motherboard ရဲ့ chipset ပေါ်မှာလည်းမူတည်လို့ထင်ပါတယ်
ဟုတ်ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မှာနေတာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင် လုပ်တုန်းက server အတွက်ဘာ cd မှပါမလာဘူးခင်ဗျ။ စက်ဆင်တဲ့ ဆရာက သူအတွက် server အတွက် driver တွေကိုရှာရင်းနဲ့ သူက client စက်တွေရဲ့ board driver အခွေတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ ရပြီဆိုပြီးတော့ run လိုက်တာဘဲဗျ။ ကျွန်တော်ကဘာကွာလည်းလို့မေးတော့လည်း ပြန်မဖြေဘူးဗျား:frown:။ ကျွန်တော်ကြည့်တော့ cd ပေါ်မှာပါတဲ့ နံပတ်ကလေးတော့ မတူဘူးဗျ။ graphic card driver လည်းအတူတူဘဲ။card နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ driver ထဲမှာ windows server အတွက်ပါမလာဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ဆွေနွေးပေးတဲ့အစ်ကိုများကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သိတဲ့လူများလည်းထပ်ရေးပေးကြပါဦး။
အကိုရဲ့ hardware specification တွေကိုပြောပြနိုင်မလားကျွန်တော်ကူရှာပေးကြည့်မယ်လေ
ကျွန်တော်ကတော့ Board driver (XP) CD ဘဲအဲ့ထဲမှာ parth တော့အတည်မဟုတ်တော့ပြောလို့ရဘူး
HD folder ထဲကနေသွင်းတာဘဲရတယ်အကို driver ကိုထည့်ပြီးပြန်စမ်းကြည့်ပါအုန်းနော်
motherboard တွေမှာ server အတွက်မပါတာတွေ ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ တင်လို့တော့ရပါတယ်... manual တင်ကြည့်ပေ့ါ ... new hardware wizard ကနေ သွားပြီး xp အတွက် driver folder ထဲမှာ
autorun file သို့မဟုတ် *.dll file ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်.
အဲ့စက်ရဲ့ window xp driver နဲ့ပဲတင်ကြည့်ပါလား ....... ကျွန်တော်တော့အဲ့တင်တာရတယ် ဗျ ...... :cool:
Windows server 2003 ဆိုရင်တော့ Windows xp အောက်မှာပါတဲ ့Driver နဲ ့တင်ကြည့်ပါ။ Windows Server 2008 ကတော့ Vista platform နဲ ့မို ့လို့Vista folder အောက်မှာပါတဲ့ Drivers တွေနဲ ့တင်ကြည့်ပါလားဗျာ။